मनसुनको सुरुवातमै किन पर्‍यो धे’रै पानी ? – Khabarhouse
Khabar house | २ असार २०७८, बुधबार १५:४९ | Comments
काठमाडौं : तीन दिन पहिले यो बर्षको मनसुन सुरु भएको बताउँदै मौसमविदहरुले एक साता लगातार बर्षा हुने पूर्वानुमान गरेका थिए। नभन्दै असार १ गतेदेखि नै देशमा विभिन्न भूभागमा बर्षा भइरहेको छ। अविरल बर्षाका कारण आएको बाढीले गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत मनाङको चामेमा भौतिक क्षति पुर्‍यायो । बागमती प्रदेश अन्र्तगत सिन्धुपाल्चोकमा रहेको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची बजारमा बाढीले बितन्डा मच्चायो ।
याङ्ग्री र लार्के खोला मिसिएको इन्द्रावती नदी र मेलम्ची नदी मिसिने स्थानमा मेलम्ची बजार छ । दुई तिर बाट आएको बाढीले मेलम्ची बजार क्षेत्र डुबानमा पर्‍यो भने उता मेलम्ची नदीले हेलम्बु गाउँ पालिकाका नदी छेउका घर गोठ तथा करोडौं लगानी गरिएका रेन्बो ट्राउट फार्म बगाएको छ । उता लमजुङको दोर्दीखोलामा आएको बाढीले १४ घर बगाएको छ । यस्तै पाल्पामा परेको अबिरल बर्षाले रानीमहल तथा रुरुक्षेत्र डुबानमा परेको छ भने गोरखा चुमनुब्रीमा बुढीगण्डकी नदीले ४ घर बगाएको छ भने ७ घर जोखिम मा छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मनसुनको प्रभाव पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी बर्षा भइरहेको छ । किन मनसुनको सुरुवातमै भारी वर्षा हुन पुग्यो? जल तथा मौसम विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान शाखाका बरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेल यसवर्ष मनसुन अलि छिटो सुरु भएको बताउँछन् । नेपालमा पानी पार्ने प्रणाली बंगालको खाडीबाट भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गर्छ । यस्तै पानी पार्ने प्रणाली नेपालको आकासमै पनि विकास भएकाले देशभर लगातार मध्यम खालको बर्षा भइरहेको पौडेलको भनाइ छ ।
उनले भने–‘मनसुन कहिले एकदमै सक्रिय भएर प्रवेश गर्छ, कहिले नि’स्क्रिय भएर प्रवेश गर्छ । यसपाली सुरुवाती रुपमै सक्रिय रुपमा प्रवेश गरेको थियो । यो प्रक्रिया अझै केही दिन रहने देखिएको छ । गण्डकी लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा ल’गातार बर्षा भइ रहेको छ । बिहीबारबाट भारी बर्षा केही कम होला, तर मध्यमखालको बर्षा दुई–चार दिन रहने देखिएको छ ।’ वर्षा गराउने प्रणाली जसलाई न्यून चापीय रेखा भनिन्छ ।
बंगालको खाडीबाट विकास भएर भारतको बिहार, झारखण्ड हुँदै नेपालको सीमाछेउ पूर्वोत्तर भागमा न्यून चापीय क्षेत्र अर्थात वर्षा गराउने प्रणाली विकास भएको छ । त्यसको कारणले र नेपालमा पनि न्युन चापीय रेखा पनि अर्थात वर्षा गराउने प्रणाली विकास भए कोले अहिले नेपालमा बढी बर्षा भइरहेको मौसमविद् पौडेलको भनाई छ । अघिल्ला बर्षको तुलनामा मनसुन सक्रिय रुपमा प्रवेश गरेकोले देशभरि नै हल्कादेखि मध्यम खालको बर्षा भइरहेको छ ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्थानमा मध्यम र कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ । जसका कारण बाढी पहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेको भारी बर्षा बिहीबार देखि केही कम भएर मध्यम खालको बर्षा हुने मौसमविद् बरुण पौडेलले बताए । यो क्रम अझै एक सातासम्म कायम रहने उनको भनाइ छ ।